Messi Iyo Aguero Oo Middoobaya, Neymar Oo Ka Tagaya PSG , Arsenal Oo Daafac Bir Ah Heshay & Wararka Kale Ee Suuqa – Garsoore Sports
Messi Iyo Aguero…
Asc… Maalin wanaagsan, soo dhawaada saaxiibbayaal.
Waxaan qoraaladeenan idinkugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga cayaartooyda iyo sida ay warbaahinadu qorayaan. haddaba maxaa maanta ka cusub?
Tababaraha PSG Mauricio Pochettino ayaa doonaya inuu PSG kula middoobo weeraryahanka Tottenham Harry Kane, haddii weeraryahan Kylian Mbappe ama kubbadsameeyaha reer Brazil Neymar Jr uu ka tago kooxda Faransiiska xagaagan. (Sunday Mirror)
Tababaraha kooxda Leicester City Brendan Rodgers ayaa ah hoggaamiyaha ugu cadcad ee Jose Mourinho ka beddeli kara xilka tababarennimo ee kooxdaasi – kaddib markii uu ku dhawaaday inuu shaqada helo sagaal sanno ka hor. (Football Insider)
Manchester United ayaa ka dhiggeysa cayaaryahanka khadka dhexe ee Aston Villa Jack Grealish bartilmaameedkooda ugu sarreeya xagaaga kaddib markii ay ku guuldarreysteen u dhaqaaqista cayaaryahanka heerka caalami ee dalka England sanadkii hore. (Todofichajes)
Weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee reer Norway Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah, ayaa dalban doona xirmo lacageed oo shan sano ah kaasoo ku kacaya £78 Milyan si uu ugu dhaqaaqo ciddii dooneysa xagaagan. (Sunday Mirror)
Barcelona ayaa diyaarsatay liis ay ku doonayso weeraryahan cusub oo ay ka mid yihiin Weeraryahanka Dortmund iyo Norway ee Haaland iyo weeraryahanka reer Argentina ee kooxda Man City ee Sergio Aguero (Mundo Deportivo)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa soo jeediyay in kooxda ay isku dayi karto inay ceshato 22 jirka qadka dhexe ee reer Norway Martin Odegaard wixii ka dambeeya dhammaadka amaahdiisa, kaasoo dhacaya dhammaadka xilli cayaareedkaan. (Times)
Arsenal ayaa ka dhigtay daafaca dhexe ee reer Ivory Coast Odilon Kossounou oo 20 jir ah mid ka mid ah bartilmaameedyadeeda ugu sarreeya xagaaga, Kossounou wuxuu u saftaa kooxda Club Brugge ee dalka Belgium. (Sunday Mirror)
Wolves ayaa sidoo kale ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Kossounou oo lagu qiimeeyo 20 milyan ginni. (The Sun)
Tottenham ayaa la filayaa inay xagaaga loolan ugu jirto saxiixa cayaaryahanka khadka-dhexe ee RB Leipzig iyo Austria Marcel Sabitzer. (Hadalka Kooxda)
Daafaca dhexe ee reer England ee Brighton Ben White oo 23 jir ah, ayaa weli diiradda u saaran Liverpool xagaaga. (Football Insider)
Manchester United ayaa isha ku heysa daafaca reer England ee Everton Jarrad Branthwaite, oo 18 jir ah, oo haatan amaah kula jooga kooxda Blackburn. (Mail SUnday)
Manchester United ayaan la xiriirin wakiilka daafaca Real Madrid iyo Spain Sergio Ramos kaasoo lagu heli karo beeca xorta ah xagaagan. (Fabrizio Romano – Caught Offside)
Tababaraha reer Holland Louis van Gaal ayaa sheegay in Manchester United ay ku guuldarreysatay inay lasoo saxiixato daafaca reer England John Stones markii uu ka tirsanaa kooxda Everton intii uu hoggaaminayay kooxda ka dhisan Old Trafford, iyadoo 26 jirkaan uu doortay inuu aado Manchester City sannadkii 2016. (Daily Star Sunday)
Xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka Max Kruse, oo 32 jir ah, haatanna ka tirsan kooxda Union Berlin, ayaa shaaca ka qaaday inuu ku dhowaaday inuu oggolaado u dhaqaaqista Liverpool xagaagii 2019 kahor inta uusan qaab cayaareedkii Divock Origi ee Champions League-ga uusan arkin tababare Jurgen Klopp taasoo sababtay inuu maankiisa beddelo heshiiskanna ka laabto. (Der Kickbase Podcast, Mail Online)